Sevilla oo warbixin ay soo saartay ku shegtay in Unai Emery ka tagayo – Gool FM
Sevilla oo warbixin ay soo saartay ku shegtay in Unai Emery ka tagayo
Kaafi June 12, 2016
TURIN, ITALY - MAY 14: Head Coach Unai Emery of Sevilla celebrates victory during the UEFA Europa League Final match between Sevilla FC and SL Benfica at Juventus Stadium on May 14, 2014 in Turin, Italy. (Photo by Clive Rose/Getty Images)
(Seviila) 12 Juunyo 2016. Unai Emery waxa uu ka tagay Sevilla kaddib saddex olole oo uu la joogay kooxda reer Spain.
Emery, oo ay da’diisu tahay 44, ayaa ku hogaamiyey Sevilla saddex Europa League, waxa ay taasi noqotay rikoor waxaana u kii u dambeeyey 3-1 uga qaaday Liverpool.
Horyaalka France Paris Saint-Germain ayaa ugu cad cad in ay Paris cagaha u soo dhigaan Emery laakiin waxaa ka horeeysa in ay eryaan Laurent Blanc si ay ula saxiixdaan kaartiistaha reer Spain.
Tababarihii hore ee Chile Jorge Sampaoli ayaa haatan wada xaajood uu Emery ku dhaxlayo ku jira, ka ciyaarida Champions League ayaa qodob weyn u ah 54 jirka, kaas oo aan wali maamule ka noqon Europe.
Warbixin ay soo saartay Sevilla ayaa lagu yiri: ‘Sevilla FC waxa ay heshau xiriir rasmi ah oo ay la soo sameyeen qareenada Unai Emery waxa ayna sii socon doonaa ilaa iyo toddobaadka dambe, si is af garad labada dhinac ah lagu soo af jaro xiriirkii wada shaqeneyd ee Sevilla FC maxaa yeelay ma doonayo in uu sii hayo xilka tababare xilli ciyaareedka 2016-17.’
EURO 2016: GER VS UKR 2-0...Jarmanka oo sidii lagu yaqaanney si wanaagsan ku bilowday Euro + Sawiro
Vincent Kompany oo ciyaartii England oo dhamaan kahor Twitter-kan ku qiimeeyey!